अब राजनीति सफा गर्ने आन्दोलन चलाऔं: नारायणकाजी श्रेष्ठ - News site from Nepal
अब राजनीति सफा गर्ने आन्दोलन चलाऔं: नारायणकाजी श्रेष्ठ
हामी सबैले अहिले समृद्धि समृद्धि भन्दैछौं । नेकपा यही भन्छ, कांग्रेस यही भन्छ । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी यही भन्छन् ।
समृद्धि नभई हुँदैन । तर, यत्रो सम्भावना भएको देशमा पनि हामीले किन अहिलेसम्म समृद्धि र विकास हासिल गर्न सकेनौं ?
अझै पनि देशमा किन विकास हुन सकिरहेको छैन ? किनभने समृद्धिमा पुग्न नदिने हामीसँग अझै एउटा फलामको ढोका छ । त्यो फलामको ढोका भनेको राज्यमा, राजनीतिक पार्टीहरुमा र समाजमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचार हो ।
के हामी राजनीतिक सफाइ आन्दोलनका लागि तयार हौंला ? यो सजिलो छैन । म तपाईहरुलाई भनौं, नेपालमा काम नगरिकन, राजनीतिक पार्टीमा लागेर कमिसन र दलालीको भरमा वैभवशाली जीवन बिताउने बीसौं हजार नेता कार्यकर्ता छन् । यस्ता नेता कार्यकर्ताहरुको भरमा समृद्धि कसरी हुन्छ ?
भ्रष्टाचारविरोधी भाषण गर्ने तर मेरा नजिकका बाहेक अरुलाई मात्रै कारवाही गर भनेर कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ? त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने अब राजनीति सफाइ गर्ने आन्दोलन चाहिएको छ । यो आन्दोलन पार्टीभित्र पनि चाहिएको छ र समाजभित्र पनि चाहिएको छ । अनिमात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौं ।
(नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले बिराटनगरमा आयोजित मानवअधिकार तथा शान्ति समाजको बैठकमा गरेको सम्वोधनको अंश)